भेनेजुएलामा प्रदर्शनकारीमाथि बख्तरबन्द गाडी गुडाइयो ! आज पनि विरोध प्रदर्शन - AIM Khabar
गृह पृष्ठ > विश्व समाचार > भेनेजुएलामा प्रदर्शनकारीमाथि बख्तरबन्द गाडी गुडाइयो ! आज पनि विरोध प्रदर्शन
May 2, 2019 May 2, 2019 GRISHI461
काराकास । भेनेजुएलाका विपक्षी नेता जुआन गुआइडोले आफ्ना समर्थकहरुलाई बुधबार पनि सडकमा प्रदर्शन गर्न आह्वान गरेका छन् । मंगलबारको प्रदर्शन तनावपूर्ण भएपछि उनले बुधबारको लागि पनि प्रदर्शनका लागि आह्वान गरेका हुन् ।
मंगलबारको प्रदर्शनको राष्ट्रपति निकोलास मादुरोले प्रतिवाद गरेका थिए । मादुरो प्रशासनले प्रदर्शनकारीलाई बख्तरबन्द गाडी प्रयोग गरेर प्रदर्शन गरिरहेको स्थानमै कुदाएको दृश्यसहितका कतिपय भिडियोसमेत सार्वजनिक भएका छन् । तर प्रदर्शनकारीलाई केही भए वा नभएको भिडियो प्रष्ट देखिँदैन ।
मादुरोले टेलिभिजननमा सम्बोधन गर्दै गुआइडो पक्षले सानो समूहमा प्रदर्शन गरेको तर उनी असफल भएको बताएका थिए । अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पम्पेओले भने मादुरो मंगलबार क्युवातर्फ भाग्न लागेको भएपनि रसियाले रोकेको सीएनएनसँगको कुराकानीमा बताएका थिए । (बीबीसीको सहयोगमा)
दक्षिण सुडानका १० जना मन्त्रीलाई कोरोना संक्रमण
May 22, 2020 May 23, 2020 GRISHI